ट्रम्पले मच्चाएकाे वाशिंगटन हिंसा : के अमेरिका गृहयुद्ध तर्फ जान सक्छ ? अमेरिकी राजनीति
पुस २३, काठमाडौं । बुधबार अमेरिकी संसदभित्र भएको हिंसात्मक घटनाले निकै प्रश्नहरु उब्जीएका छन् । घटनाले अमेरिकाको हालको संकट त देखाएको छ नै आगामी संकटलाई पनि संकेत गरेको छ ।
केहि अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले अमेरिका कतै गृहयुद्ध तर्फ जान लागेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन् । बुधबार भएको घटनाले अमेरिकाभित्रको समस्या सामान्यकृत अवस्थामा नरहेको धेरैको बुझाई छ ।
राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनले पनि प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा हालका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विद्रोह सुरु गरेको बताएका छन् । सञ्चार माध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले भनेका छन्, ‘संसदभित्र भएको घटना विरोधको घटना होइन्, यो एक विद्रोह हो ।’
ट्रम्पले किन गराए संसदभित्र हिंसा ?
गत ३ नोभेम्बरमा अमेरिकामा राष्ट्रपतिय निर्वाचन भएको थियो । जुन निर्वाचनको नतिजा जो बाइडेनको पक्षमा आएको थियो ।
जो बाइडेनले ३०६ इलेक्ट्रोरल मत पाएका थिए भने ट्रम्पले २३२ मात्रै मत प्राप्त गरेका थिए । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनको लागि २७० भोट चाहिन्छ । तर, बाइडेनले बहुमतभन्दा पनि अधिक भोट प्राप्त गरेका थिए ।
तर, उक्त नतिजाप्रति हालका राष्ट्रपति ट्रम्प भने सहमत छैनन् । उनले आफुँले नै जितेको भन्दै उक्त जितलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनले चुनावी नतिजाको छानबिनको लागि अदालतमा पनि निवेदन दिएका थिए ।
बुधबार अमेरिकी संसदको दुवै सदनमा प्राप्त इलोक्ट्रोरल भोटलाई गन्ने र वैद्यानिकता दिने कार्यक्रम थियो । सदनले वैद्यानिकता दिएसँगै बाइडेनले सपथ लिने बाटोसमेत खुल्थ्यो । तर, ट्रम्पले उक्त बाटो बन्द गर्नको लागि संसदमा हिंसात्मक घटना घटाएका हुन् । तर, यसमा उनी असफल भएका छन् ।
अहिले हिंसात्मक प्रदर्शनलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रण लिएको छ भने संसदमा मतगणना जारी छ । प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै वाशिंटनभर कफ्र्यू छ ।
ट्रम्पको सोंचले निम्तिन सक्छ युद्ध
राष्ट्रपतिय निर्वाचन चल्दै गर्दै अमेरिकी विश्लेषक रोबर्ट रीचले भनेका थिए, ‘यदि बाइडेनले चुनाव हराए भने ट्रम्पले नतिजा स्वीकार्ने छैनन्, उनले राष्ट्रवाद र नश्लवादको साहारा लिनेछन्, नतिजालाई अस्वीकार गर्दै देशव्यापी प्रदर्शनलाई बढावा दिनेछन् ।’ विश्लेषक रीचको भनाई आज अमेरिकामा देखिएको घटनाले पुष्टी भएको छ ।
ट्रम्पले चुनावी नतिजा आएको ६४ दिनसम्म पनि नतिजालाई स्वीकार गरेका छैनन् । उनले आफ्ना समर्थकलाई पनि भड्काउने खालका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
वैद्यानिक बाटोबाट सत्ता छाड्न परेको खण्डमा पनि ट्रम्पले हिंसाको बाटो लिनसक्ने बुझाई अमेरिकामा छ । उनले राष्ट्रवादी र नश्लवादी सोंचलाई उचालेर अमेरिकामा गृहयुद्ध गराउन सक्ने अमेरिकी विश्लेषकहरुको विश्लेषण छ । अहिलेको निर्वाचनमा पनि उनले राष्ट्रवाद र नश्लवादलाई नै अगाडि सारेका थिए ।
निर्वाचनपूर्व एक श्वेत प्रहरीले जर्ज फ्लोयड नाम गरेका एक अश्वेत व्यक्तिलाई घाँटी न्याकेर हत्या गरेको घटनासँगै अमेरिकामा निकै ठुला प्रदर्शन भएका थिए । तर, उक्त घटनाप्रति भने ट्रम्पले माफीसमेत मागेका थिएनन् । उनले मारिएका व्यक्तिलाई ‘चोर’को संज्ञा दिएका थिए ।
घटना लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेको स्टाटस निकै भाइरल पनि बनेको थियो । उनले लेखेका थिए, ‘जब लुट्न शुरु हुन्छ, तब गोली हान्न पनि शुरु हुन्छ, यसैकारण मिनेपोलिसमा बुधबार राति एक व्यक्तिलाई गोली हानेर मारिएको थियो ।’
फ्लोयडको हत्याअघि अमेरिकामा फेब्रुअरी र मार्चमा त्यसगरि २ अश्वेत जातीका व्यक्तिलाई मारिएको थियो ।
उनको नश्लवादी सोंच गम्भीर खालको भएको धेरैको बुझाई छ । उनको सोंचले नै अमेरिकामा द्धन्द्ध सिर्जना गराउन सक्ने विश्लेषकहरुको धारणा छ । एजेन्सीको सहयोगमा
वाशिंगटन हिंसा : मृत्यु हुनेको संख्या चार पुग्यो, हिंसा नियन्त्रणपछि बैठक सुरु